Al-shabaab oo ku hanjabtay weeraro aar-goosi ah oo ku wajahan dawladda iyo AMISOM. – Radio Daljir
Al-shabaab oo ku hanjabtay weeraro aar-goosi ah oo ku wajahan dawladda iyo AMISOM.
Muqdisho, June 14- Ururka Al-shabaab ayaa ku hanjabay in ay qaadi-doonaan weeraro is-miidaamin ay oo ay la bar-tilmaameedsan doonaan hay?adaha kala duwan ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM.
Afhayeen u hadlay dhaqdhaqaaqa Al-shabaab oo lagu magacaabo Sh Cabdicasiis Abu-muscab ayaa sheegay in ay qorshaynayaan weeraro lixaadleh oo iskugu jira qaraxyo iyo is-midaamin naf-hurnimo oo ay doonayaan in ay la-eegtaan dawladda iyo ciidamada kaaba ee AMISOM.
Afhayeenka u hadlay Al-shabaab ayaa qirtay in ay iyagu ka danbeeyeen weerarkii is-miidaaminta ahaa ee todobaadkii aynu soo dhaafnay lagu dilay wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaran Cabdishakuur Sh Xasan Faarax, kaasoo lagu qarxiyey gurigiisa.
Dhinaca kale degmada Dharkaynlay ee gobolka Banaadir ayaa xalay lagu weeraray ciidamo ay lahaayeen dawladda iyo ururka Ahlu-sunna, weerarkaasi oo ahaa mid bambaanooyin loo adeegsaday ayaa la tilmaamayaa in ay ku dhaawacmeen illaa 4 ruux oo qaarkood ay askar yihiin.
Weerarkaasi bambaano ee xalay ayaa ku soo aadaya xilli Al-shabaab ay ku goodiyeen in ay qaadi-doonaan weeraro qorshaysan taasoo la tilmaamayo in ay aar-gudasho u tahay dilkii hoggaamiyihii Al-qaacidada bariga Afrika ee la dilay inkastoo aysan wali rumaysnayn Al-shabaab dilka Fasul Cabdalla.